Ungalifaka Kanjani I-ejensi Yakho Ukuphatha Uhlu Lwebhizinisi Lakho le-Google | Martech Zone
Kade sisebenza namakhasimende amaningana lapho izivakashi zosesho zendawo zibaluleke kakhulu ekutholeni amakhasimende amasha. Ngenkathi sisebenza kusayithi labo ukuqinisekisa ukuthi liqondiswe ngokwendawo, kubalulekile futhi ukuthi sisebenzele kulokho Uhlu lwebhizinisi le-Google.
Kungani Kufanele Ugcine Uhlu Lwebhizinisi le-Google
Amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha yakwaGoogle ahlukaniswe waba izingxenye ezi-3:
Izikhangiso ze-Google - Izinkampani ezibhida ezindaweni eziyinhloko zesikhangiso phezulu nangaphansi kwekhasi lokusesha.
I-Google Map Pack - uma i-Google ikhomba indawo njengokufanelekile ekusesheni, babonisa imephu enezindawo ezikhona zamabhizinisi.
Imiphumela Yokucinga Engokwemvelo - Amakhasi wewebhusayithi emiphumeleni yosesho.
Lokho izinkampani eziningi ezingakuqapheli ukuthi isikhundla sakho kupakethe yemephu cishe asihlangene nakancane nokwenza kahle iwebhusayithi yakho. Ungakwazi ukukala, ubhale okuqukethwe okumangazayo, usebenzele ukuthola izixhumanisi ezinsizakalweni ezifanele… futhi ngeke kukuhambise kupakethe lemephu. Iphakethe lemephu lilawulwa yizinkampani ezinomsebenzi wakamuva, owenzeka kaningi ohlwini lwazo lwe-Google Business… ikakhulukazi izibuyekezo zazo.
Kuyakhathaza futhi ukugcina esinye isiteshi sokumaketha, lokhu kubaluleke kakhulu ekuthengisweni kwasendaweni. Lapho sisebenza nenkampani yasendaweni, kubalulekile ukuthi siqinisekise ukunemba kohlu lwebhizinisi labo le-Google, siligcine libuyekeziwe, futhi sicele ukubuyekezwa njengenjwayelo ejwayelekile namathimba abo.
Ungayengeza Kanjani Umenzeli Wakho Kuhlu Lwebhizinisi Lakho le-Google
Umthetho wokuthi yonke inkampani okumele ime ngakuyo iwukuba nayo yonke imithombo yezinsiza ebaluleke kakhulu ebhizinisini labo - kufaka phakathi isizinda sabo, i-akhawunti yabo yokubamba, ihluzo zabo… nama-akhawunti abo omphakathi kanye nohlu. Ukuvumela i-ejensi noma umuntu wesithathu ukwakha nokuphatha enye yalezo zinsiza kucela inkinga.
Ngake ngasebenzela usomabhizinisi wendawo owayengakunakile lokhu futhi wayenama-akhawunti amaningi we-YouTube namanye ama-akhawunti omphakathi angakwazanga ukungena kuwo. Kuthathe izinyanga ukulandelela osonkontileka abadala nokubenza badlulise ubunikazi bama-akhawunti babuyele kumnikazi. Sicela ungavumeli noma ngubani ukuthi abe nezimpahla ezibaluleke kakhulu ebhizinisini lakho!
Ibhizinisi lakwaGoogle alihlukile. I-Google izokwenza ukuthi uqinisekise ibhizinisi lakho ngenombolo yocingo noma ngokuthumela ikhadi lokubhalisa kukheli lakho leposi elinekhodi ongayifaka. Uma usubhalisile ibhizinisi lakho futhi ususethwe waba ngumnikazi… lapho-ke ungangeza i-ejensi yakho noma umxhumanisi ofuna ukukwenzela futhi akuphathele isiteshi.
Lapho ufinyelela i-akhawunti yakho, ungazulazulela kubasebenzisi kwimenyu engakwesokunxele, bese ufaka ikheli le-imeyili lomenzeli wakho noma lomxhumanisi ukuze ubangeze ku-akhawunti. Qiniseka ukuthi uwasetha ku- Umphathi, hhayi Umnikazi.
Ungahle futhi uqaphele phansi ekhasini lapho kukhona ikholi ongayithola Faka umphathi kubhizinisi lakho. Kuzovela inkhulumomphendvulwano efanayo ukufaka abasebenzisi ukuphatha ikhasi.
Kepha Umenzeli Wami Ungumnikazi!
Uma i-ejensi yakho isivele ingumnikazi, qiniseka ukuthi bangeza ikheli le-imeyili elihlala njalo lomnikazi webhizinisi lakho. Lapho lowo muntu (noma uhlu lokusabalalisa) esamukele ubunikazi, nciphisa indima ye-ejensi umphathi. Musa ukukuhlehlisa lokhu kuze kube kusasa… ubudlelwano obuningi bezebhizinisi buhamba kabi futhi kubalulekile ukuthi uhlu lwebhizinisi lakho lube ngelakho.
Qiniseka Ukususa Abasebenzisi Ngemuva kokuthi Benziwe!
Njengoba kubalulekile ukufaka umsebenzisi, kubalulekile futhi ukususa ukufinyelela lapho ungasasebenzi naleyo nsiza.
Tags: engeza i-ejensiengeza umsebenzisigoogle ibhizinisiUhlu lwebhizinisi le-googleumsebenzisi wohlu lwe-googlegoogle ibhizinisi lamiindlelaphatha ibhizinisi le-googlephatha i-google ibhizinisi lamiumphathiiphakethe lemephuumnikaziinyoka
Imithetho eyi-10 yokuthi ungaphendula kanjani ekubuyekezweni okungekuhle ku-inthanethi